अनिल शर्मा – eratokhabar
२०७८, २८ बैशाख मंगलबार १२:१८
गतवर्ष मङ्सिर २३ गते प्रम केपी ओलीद्वारा ‘राजावादी र विप्लव’ चुनौतीका विरुद्ध सहकार्य गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । त्यसै दिन मोरङ जिल्ला मिक्लाजुङ १, रमिते गाउँ, बर्खेटोल निवासी शिक्षक पेसामा रहेर प्रहरीको गुप्तचर विभागमा समेत कार्यरत राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ मारिए…
सरकार–नेकपाबीचको वार्तालाई कसरी बुझ्ने ?
२०७७, १२ चैत बिहीबार ०८:१८
केपी वली नेतृत्वको विवादित अस्थिर सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच वार्ताप्रक्रिया सुरु भइरहेको छ । राजनीतिक दलहरूबीचमा छलफल, भेटघाट, संवाद सधैँ चलिरहेको हुन्छ । यो प्रचार गरिरहनुपर्ने वा लुकाउनुपर्ने विषय पनि होइन । यसपटक सरकार र नेकपाबीचमा औपचारिक…
संवाद गर्ने त मालिक ?
२०७७, १ चैत आइतबार ११:१२
गोरो मालिकले आतङ्ककारी घोषणा गरेकै हो आतङ्ककारी/हत्यारा/लुटेरा के पनि भनेनौँ मालिक ! आज किन हरियो झिंगाझै घुम्दैछौ नक्खुतिर कस्तो जाल बस्दैछ मालिक ? तिम्रो मूल–प्रवाह भनेकै हूँ म छेपारो होइन तर मालिकको लोली किन फेरिएको ? कसले कान फुक्यो मालिक…
धर्म र कम्युनिस्ट
२०७७, ३० माघ शुक्रबार १६:४३
मानवसभ्यताको प्रातःकालमा मानिस दैविक ज्ञानको निकट थिएन । प्राकृतिक घटना र प्रकृतिका रहस्यहरू देखेर उसमा कुतुहल तथा भय सिर्जना हुनु स्वाभाविक थियो । प्रकृतिका रहस्यहरूको वैज्ञानिक कारण नजान्दा कुनै अलौकिक शक्तिको अस्तित्व कल्पना गरेको हुन सक्छ । अहिले पनि कैयौँ…
वली शासनको ‘खुफिया कनेक्सन’
२०७७, २७ कात्तिक बिहीबार १७:५५
‘इतिहासले केही पनि सिकाउँदैन तर यसबाट पाठ नसिक्नेलाई खालि सजाय मात्र दिन्छ । ’ – भासिली क्लि उचेस्की (रुसी इतिहासकार एवम् सांस्कृतिकर्मी) एक वर्षअघिको प्रसङ्ग हो, एकजना काठमाडौँ निवासी वरिष्ठ पत्रकारको निवासमा पुगेको थिएँ । उनको निवासमा ३ दिन बस्दा…
प्रहरी बलमा मानसिक रोग
२०७७, २३ असोज शुक्रबार ०९:१७
भदौ २३ गते राती कति बेला हो रूपनी, सप्तरी पुग्दा नै कोसी नदीको चिसो हावा आएको थियो । अमानवीय र कायर प्रहरीहरू ले पिसाब फेर्न पनि दिएनन् । अदालत जाँदा दुईवटा एसएलआर, अश्रुग्याँसका लोला, सटगन, सानो पेस्तोल, लट्ठीसहित १० जना…
समकालीन राजनीतिका अनुत्तरित मुद्दा
२०७७, २४ भदौ बुधबार १४:१०
२०४६ चैत २४ गते जनआन्दोलनको सर्वाधिक उत्कर्षको दिन थियो । क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको मोर्चा ‘राष्ट्रिय जनआन्दोलन संयोजन समिति’ ले त्यस दिन नेपाल बन्द आह्वान गरेको थियो । मोर्चाले गणतन्त्रको नारा दिएको थियो । काङ्ग्रेस र ‘‘वाम’’ मोर्चाको ‘राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था’ भन्दा…
२०७७, ३० साउन शुक्रबार ०६:३७
‘पन्जाबी सुबे मेरा लास पर बनेगा’ –राजीव गान्धी इन्दिरा गान्धीको हत्या भएपछि उनका छोरा राजीव गान्धी भारतको प्रधानमन्त्री भएका थिए । इन्दिरा गान्धीले ‘र’ को योजनामा सवुर्ण मन्दिरमा छापामार्दा रगतको खोलो बगेको थियो । आफ्नी आमाको हत्यालगत्तै राजीवले ‘खालिस्तान मेरो…
२०७७, ८ साउन बिहीबार १६:०१
देशको कार्यकारी सत्ता सधैँ सामन्त र दलाल पुँजीपति वर्गको हातमा रहेको छ । त्यसले सीमान्तकृत समुदायका पक्षमा कहिल्यै ठोस काम गरेन । चितवनका मुख्य आदिबासी थारू, चेपाङ, दराई, बोटे, मुसहर समुदायलाई काठमाडौँस्थित सिंहदरबारले २०१४ सालदेखि नै युद्धको घोषणा गरेको छ…
राष्ट्रियता र एमसीसी परियोजना
२०७७, ७ साउन बुधबार ०६:५३
एकातिर सोभियत सङ्घको दबदबा, अर्कोतिर एसियाको विशाल देश चीनमा समाजवादी क्रान्ति अवश्यम्भावी देखेपछि चीन र उसको छाललाई अवरोध (बेरियरको रूपमा) गर्न सन् १९४७ मा हिन्द रणनीति गठन गर्यो । तर चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताजकिस्तान घोषणापत्र जारी गरेपछि पुँजीवादी संसार…
नेपालमा एकैदिन २०३ जनाको मृत्यु
आमाको सम्झनामा !